Waa Maxay Shabakada Bixinta Waxyaabaha (CDN)? | Martech Zone
In kasta oo qiimayaashu ay sii wadaan inay hoos ugu dhacaan martigelinta iyo xawaaraha ballaadhinta, haddana weli way qaali noqon kartaa in lagu martigaliyo degel websaydh heerkeedu sarreeyo. Iyo haddii aadan bixin wax badan, fursadaha ayaa ah in bartaadu si gaabis ah u socoto - luminta xaddigaaga ganacsi ee muhiimka ah.
Markaad ka fekereyso server-yadaada martigelinaya bartaada, waa inay la yimaadaan codsiyo badan. Qaar ka mid ah codsiyadaas ayaa laga yaabaa inay u baahdaan adeegahaaga inuu la xiriiro server-yada kale ee keydka ama is-dhexgalka barnaamijyada wax-soo-saarka saddexaad (APIs) ka hor inta aan la abuurin bog firfircoon.
Xirmooyinka isticmaalayaasha iyo adeegan ayaa lagu aasi karaa waqti aan codsi lahayn. Mid kasta oo ka mid ah codsiyadaas waqti ayey qaadataa. Waqtigu waa mid muhiim ah - hadday tahay adeegsadaha sugaya bog la raro ama mashiinka wax lagu raadsado ee soo socda si uu u xoqo waxyaabahaaga. Labada xaaladoodba waxay dhaawici karaan ganacsigaaga haddii bartaadu gaabis tahay. Waa dantaada ugu fiican si aad u ilaaliso boggagaaga iftiinka iyo dhaqsaha badan - inaad siiso isticmaale barta qallalan waxay kordhin kartaa iibka. Keenitaanka Google barta qallafsan waxay ka heli kartaa in badan oo ka mid ah bogaggaaga tixraac lana helo.
In kasta oo aan ku nool nahay adduun cajaa'ib leh oo leh kaabayaal internet oo lagu dhisay fiilada taas oo labadaba aan caadi ahayn isla markaana si dhakhso leh u muuqata, juquraafiga ayaa wali door weyn ka ciyaaraysa waqtiga ay qaadanayso inta udhaxeysa codsi ka yimid biraawsar, iyada oo loo marayo marinnada, illaa iyo websaydhka martigeliyaha… iyo gadaal
Erayo fudud, kolba haddii uu sii kordhayo adeegahaaga shabakaduhu macaamiishaada ayuu ka gaabiyaa boggaagu iyaga. Jawaabtu waa in laga faa'iideysto a shabakada bixinta nuxurka.
In kasta oo server-kaaga culeysyo bogaggaaga oo uu xakameynayo dhammaan waxyaabaha firfircoon iyo API codsiyada, shabakadaada gudbinta alaabtaada (CDN) waxay ku keydin kartaa walxaha shabakad loo qeybiyey xarumaha xogta adduunka oo dhan. Tani waxay ka dhigan tahay in rajadaada Hindiya ama Boqortooyada Midowday ay u eegi karto boggaaga sida ugu dhakhsaha badan sida martidaadu u socdaan.
Akamai Waa Hormuudka Teknolojiyada CDN
Kharashka CDN-yada wuxuu u dhexeyn karaa bilaash ilaa xad mamnuuc iyadoo kuxiran kaabayaashooda, heshiisyada heerka adeegga (SLAs), qiyaasta, dib u sameynta, iyo - dabcan - xawaarehooda. Waa kuwan qaar ka mid ah ciyaartoyda suuqa:
Cloudflare wuxuu noqon karaa mid ka mid ah CDN-yada ugu caansan halkaas.
Haddii aad ku jirto WordPress, Jetpack waxay bixisaa CDN u gaar ah oo aad u adag. Waxaan ku martigelinnaa boggayaga Flywheel oo ay ku jiraan CDN oo leh adeegga.
StackPath CDN waa ikhtiyaar fudud oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar oo bixin kara waxqabad weyn.
Amazon CloudFront waxaa laga yaabaa inuu noqdo CDN-ka ugu weyn ee leh Adeegga Kaydinta ee Amazon Simple (S3) oo ah bixiyaha CDN ee ugu awoodi kara hadda. Waxaan u adeegsanaa oo kharashkeennu si dirqi ah ugu sarreeyaa $ 2 bishii!
Nidaamka Limelight or Akamai Shabakadaha ayaa caan ku ah goobaha ganacsiga.
Sawir laga soo qaaday Shabakadaha Akamai
Bixinta macluumaadkaagu kuma eka inuu ku koobnaado sawirro taagan, sidoo kale. Xitaa qaar ka mid ah boggaga internetka ee firfircoon ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi karaa iyada oo loo marayo CDNs. Faa'iidooyinka CDNs waa badan yihiin. Marka laga reebo hagaajinta daahitaanka goobtaada, CDNs waxay ku siin karaan gargaar culeysyadaada serverka hadda jira iyo isugeynta si wanaagsan oo ka baxsan xaddidaadda qalabkooda.
Heerarka ganacsi ee CDN-yada badanaa waa kuwo aan shaqo lahayn oo waxay leeyihiin waqtiyo sare sidoo kale. Iyo adoo ka dejinaya taraafikada CDN, waxaad xitaa ogaan kartaa in martigelintaada iyo kharashka xawaarahaaga uu hoos u dhacayo oo ay weheliso kororka dakhliga. Maaha maalgashi xun! Marka laga soo tago faafidda sawirka, haysashada shabakad gaarsiinta waxyaabaha waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loogu adeegi karo bartaada si dhakhso leh!
Shaacinta: Waxaan nahay macaamiil iyo kuwa gacansaar la leh StackPath CDN oo jecel adeegga!
Tags: akamaiShabakadaha Akamaiamazon Cloudfrontcdndaruurahashabakada bixinta nuxurkasida looga dhigo deg deg deg deg ahjetpack cdnlimelightshabakadaha iftiinkamaxcdnyaree waqtiga culeyskaxawaaraha goobtawaxawaa maxay cdnwaa maxay shabakada gudbinta waxyaabahaWordPress
Dib-u-habeyn dheeraad ah oo ku jirta CDN-da si loo hubiyo waqtiga dheeriga ah ee joogtada ah waxaad ka faa'iideysan kartaa Istaraatiijiyad Laba-CDN ah. Asal ahaan waxaad kuheli kartaa isku dheelitirnaan culeys inta udhaxeysa laba CDN isla waqtigaas. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan adoo hubinaya boggan.